Musha - Utter Technology
Vadivelu Comedy Movie News
Vadivelu Comedy Mobile News
UtterTechnology ndeimwe yeakanakisa maBlogs emahara Mazano uye Tricks zvidzidzo zveTekinoroji seCloud, Mitambo, Nharembozha, IoT, Digital Marketing & akawanda mamwe mapoka. Ini ndicharamba ndichiwedzera mamwe mapoka sezvinodiwa. Misoro yacho inogona kubatsira zvakanyanya kuhupenyu hwako hwemazuva ese hunotenderera neTekinoroji. Ramba wakatarira kune ino blog kuti uwane zvimwe zvigadziriso.
Nhasi Shoko #337 Hint uye Mhinduro
Dai 21, 2022 Dai 21, 2022
Wordle yatora nyika nedutu, uye kunyangwe usati watamba mutambo wemazuva ese, hapana mubvunzo kuti wakaona masikweya asina kunaka pasocial media. Asati aburitsa mhinduro,…
Nhasi Shoko #336 Hint uye Mhinduro
Dai 20, 2022 Dai 21, 2022
Nhasi Shoko #335 Hint uye Mhinduro
Dai 19, 2022 Dai 19, 2022
Nhasi Shoko #334 Hint uye Mhinduro
Nhasi Shoko #333 Hint uye Mhinduro
Dai 17, 2022 Dai 17, 2022
Nhasi Shoko #332 Hint uye Mhinduro
Dai 16, 2022 Dai 16, 2022
Nhasi Shoko #331 Hint uye Mhinduro
Dai 15, 2022 Dai 15, 2022
Maitiro ekushandisa iyo Amazon Echo kuteerera Apple Podcasts
Iyo Amazon Echo inogona kuve hubhu yevaraidzo yese iri mumba mako. Izvi zvinosanganisira kuteerera podcasts, mimhanzi, kana chero chinhu chinoridza ruzha paFire TV yako.
Kugona uye lore: Apex Legends Mobile Fade
Ignacio Huaman, wekutanga weApex Ngano dzakawanda Nhare-Yekutanga Ngano, Fade. Kusvika awedzerwa kune huru Apex Legends akatevedzana, Fade inongowanikwa muApex Legends…
Makiredhiti emahara ane Mauto Tycoon makodhi aMay 2022
Iwe unoda zvikwereti zvemahara muMasoja Tycoon Roblox? Muchinyorwa chino tinopa Mauto Tycoon makodhi aMay 2022 kuti atore emahara makiredhiti. Iwe unogona ikozvino kushandisa zvakanyanya…
Pet Simulator X makodhi (Chivabvu 2022): Madhaimondi Emahara, Mari Inosimudzira uye Gingerbread
Tsvaga ese ekudzikinura makodhi eiyo ine mavara uye inonakidza Roblox mutambo Pet Simulator X kuti uwane emahara madhaimondi, Coin Boosts, nezvimwe. Wauya kunzvimbo chaiyo kana…
Roblox Project Ghoul makodhi (Chivabvu 2022) - Yemahara spins uye inowedzera
Roblox Project Ghoul makodhi anogona kukubatsira iwe kuwana XP nekukurumidza nekukupa emahara spins, anosimudzira, uye nezvimwe mumutambo. MuProjekti Ghoul, unogona kusarudza kuve…
Nhasi Shoko #327 Hint uye Mhinduro
Dai 11, 2022 Dai 15, 2022
Wordle yatora nyika nedutu, uye kunyangwe usati watamba mutambo wemazuva ese, hapana mubvunzo kuti wakaona masikweya asina kunaka pasocial media. Wordle akatora iyo…
Nhasi Shoko #324 Hint uye Mhinduro
Dai 9, 2022 Dai 15, 2022
7 nzira dzekugadzirisa Instagram Mimhanzi isingashande
Mumwedzi mishoma yapfuura, vanhu vazhinji uye vazhinji vakaona kuti dzimwe nguva havagone kuwedzera mimhanzi ku Instagram. Kunyanya, mimhanzi inonamirwa mu Instagram Nhau haina kushanda iyo…
Maitiro ekutora Screenshot Peji Yese Webhu pa iPhone kana iPad
Apple's iOS ine yakavakirwa-mukati ficha inoita kuti utore zvidzitiro. Iyi ficha zvakare inoita kuti utore peji rese rewebhu pane yako iPhone kana iPad, iyo iwe yaunogona ipapo kuchengetedza…
Maitiro ekutamba Roblox paNintendo Chinja
Roblox inzvimbo yakakurumbira yepamhepo yemitambo inoita kuti vanhu vagadzire mitambo yavo inogona kutambwa nemunhu wese. Mamirioni avanhu anotamba nhamba huru yemitambo pachikuva,…
Maitiro ekugonesa yakasviba modhi paWikipedia nharembozha kana webhusaiti
Chero mudziyo unogona kuwana Wikipedia mune yakasviba modhi. Kana iwe ukashandisa Wikipedia yakawanda, saiti chena yekumashure inogona kupiswa mupfungwa dzako. Nzvimbo yacho yakaitwa kuti iite seyakareruka nemaune.
Zelle yakachengeteka kutumira uye kugamuchira mari kubva kuvanhu vanovimbwa
Unogona kutumira mari kumunhu waunoziva uye waunovimba naye uchishandisa Zelle. Zelle akabatana masevhisi sePayPal neVenmo muna 2017 senzira iri nyore yekutumira nekugamuchira mari pafoni yako.
Maitiro Ekutumira Manotsi uye Zvinyorwa-Zvakavakirwa Zvinyorwa kubva paFacebook
Facebook yakagadzira chishandiso chakaita kuti zvive nyore kupfuura nakare kose kuti vanhu vabve pasocial network vasina kudzima zvirimo zvachose.
Une matambudziko neAmazon app? 7 nzira dzekugadzirisa dambudziko
Dai 13, 2022 Dai 13, 2022
Iine iyo Amazon app, unogona kutenga uye kutarisa, kuisa maodha epamhepo, kutarisa mamiriro eodha, uye kunyange kuwana mutero pazvitoro zveAmazon seWhole Foods. Apo…
Maitiro ekuchengetedza Google Mepu madhairekitori kufoni yako kuitira kuti ugone kuishandisa pasina Indaneti uchityaira
Dai 12, 2022 Dai 12, 2022
Shandisa Google Mepu pasina Internet nekudhawunirodha mafambiro.Kana uri pakati nepakati uye usingakwanise kuwana internet, Google Mepu inoponesa hupenyu. Izvi…
© 2022 Utter Technology • Yakavakwa ne GeneratePress